छिटो-छिटो बिरामी पर्नुहुन्छ ! अपनाउनोस् यी उपाय ! — News of The World
मुसहर बस्तीमा बिरुवा रोपेर संविधान दिवस मनाइयो
अन्ततः फुटाउनै पर्नेभयो बडीगाड ताल, सेनाद्धारा अध्ययन सुरु
सन्राइजद्वारा तिनकुनेमा एटिएम सञ्चालन
धनी र गरीबबीचको खाडल फराकिलो बन्दै जाँदा अशान्तिको खतरा बढ्यो-अध्यक्ष दाहाल
नेकपा अध्यक्ष प्रचण्ड नान्जिङ सहरमा, विदेश विभाग प्रमुखसँग भेट
च्यारिटी शोको भब्य तयारी गर्दै पर्वत समाज बेल्जियम
छिटो-छिटो बिरामी पर्नुहुन्छ ! अपनाउनोस् यी उपाय !
संसार न्यूज संवाददातासाउन २४, २०७५
केही मानिसहरु छिटो–छिटो बिमारी पर्छन् । यस्ता मानिसहरुमा रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कम हुन्छ ।
रोगप्रतिरोध क्षमता कम हुने मानिसलाई भाइरस र ब्याक्टेरियाले छिटो आक्रमण गर्ने हुनाले यस्ता व्यक्तिलाई सधै बिरामी बनाइ राख्दछ ।
वातावरण तथा मानिसको शरीरमा यस्तो किटाणुले सधै असर गरिरहेका हुन्छन् यस्तो असरबाट बचाउन हाम्रो शरीरको प्रतिरोधक क्षमताले त्यसको रक्षा गर्दछ ।
हाम्रो शरीरको इम्युन सिस्टम यसरी नै विकास भएको छ की हानिकार र खराब व्याक्टेरियालाई नास गर्दै शरीरको लागि जरुरी ब्याक्टेरियालाई हानि नपु¥यावोस् भन्नका लागि ।
यसरी बढाउनुहोस् इम्युनिटी पावर
-कम सुत्नु पनि प्रतिरोधक क्षमतामा ह्रास आउनु हो । त्यसकारण प्रयाप्त सुत्नु जरुरी छ ।
-तनावका कारण पनि प्रतिरोधक क्षमता घट्ने हुनाले तनाव कम गर्न योग तथा व्यायाम गर्नुहोस् ।
-चुरोट लगायतका सुर्तीजन्य पदार्थको सेवन नगर्नुहोस् ।
-फलफूल तथा हरियो तरकारी भरपुरमात्रामा खानुहोस् ।
-दिनमा केही समय घाममा बिताउनुहोस् ।
लसुन-लसुनले प्रतिरोधक क्षमता बढाउने हुनाले भरपुर मात्रामा लसुनको प्रयोग गर्नुहोस् । यसले शरीरमा इम्युन सिस्टम बढाएर रोग सँग लड्न शक्ति दिन्छ । यसले लसुनले पेटको अल्सर तथा क्यान्सरबाट बचाउँछ । दिनहु दुई केस्रा लसुनको सेवनले ब्लप्रेसर घटाउन पनि मदत गर्दछ ।
पालक-प्रतिरोधक क्षमता बढाउनका लागि पालकको सेवन पनि महत्वपूर्ण हुन्छ । पौष्टिक तत्वले भरिपूर्ण पालकलाई ‘सुपर फुड’ का रुपमा पनि लिइन्छ । यसमा फ्लोट नामक तत्व पाइन्छ । उमालेर खाएको पालकले पाचनतन्त्रले सहि ढंगले कामगर्ने र कब्जियतको समस्या पनि हटाउछ ।
मसरुम-शरीरको रोग प्रतिरोधक क्षमतालाई बलियो बनाउनका लागि परापुर्वकालदेखि मसुरुमको सेवन अति फाइदाजनक मानिदै आएको छ । मसरुमको सेवनले सेतो रक्त कोशिकालाइ सक्रिय गराउन सहायक हुन्छ । यसमा सेलेनियम नामक मिनरल, एन्टीअक्सिडेन्ट तत्व भिटामीन बि, रिबोफ्लैविन, र नाइसिन नामक तत्व पाइन्छ । दिनमा ३० ग्राम मसरुम खादा यसले इम्युन सिस्टम बढाउन धेरै मद्दत गर्दछ ।
रुघा खोकी, टाउको दुख्ने, ज्वरो आउने, छालाको समस्यालाई नर्मल रुपमा नलिनुहोस् । यस्ता समस्या देखिनासाथ उपचार गराइहाल्नुुस् ।
पाटन अस्पतालमा दैनिक झण्डै दुई हजार बिरामी
कस्तो अवस्थामा माइग्रेनको समस्या बढ्छ ?
आशावादी हुनु स्वास्थ्यका लागि लाभदायक
ख्याल गर्नुहोस्, हातखुट्टा सुनिनु गम्भीर समस्या हुन सक्छ
धुलो र धुवाँले दमरोगी बढ्दै, नेपालमा नौ लाख ६० हजार दमखोकीका बिरामी
अब सिकलसेल एनिमियाको निःशुल्क परीक्षण हुने